ज्योति मगरले तताइन् महोत्सव, बिहीबार प्रकाश सपुत र खुमनको प्रस्तुती – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun ज्योति मगरले तताइन् महोत्सव, बिहीबार प्रकाश सपुत र खुमनको प्रस्तुती – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
१६ चैत्र २०७८, बुधबार २१:०४
दमौलीः दमौलीमा जारी तनहुँ महोत्सवको सातौं दिन बुधबार चर्चित कलाकार ज्योति मगरले महोत्सवस्थल मज्जाले तताइन् । कलाकार ज्योतिको प्रस्तुती हेर्नका लागि दर्शकहरुको बाक्लै भीड उपस्थित भएको थियो ।
‘जसले दिन्छ जाली रुमाल’,’ज्योति मगर त्यतै….,’ ‘चानचुन त कहाँ होर जिम्बल बाउको छोरी’ लगाएतका आधा दर्जन गीत गाउँदा दर्शकहरु उफ्री उफ्री नाच्दै हुटिङ गरेका थिए । राष्ट्रिय कलाकार समन्वय समितिका संयोजक कुमार मल्लले जानकारी दिए ।
बिहीबार अस्मीता अधिकारी, प्रकाश सपुत र सुमन कोइरालाको प्रस्तुती रहनेछ । महोत्सवमा राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारको प्रस्तुति रहेका कारण बिहीबार दर्शकहरुको भीड लाग्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय कलाकार समन्वय समितिका संयोजक कुमार मल्लले जानकारी दिए ।
महोत्सवको सातौं दिन करिब बीस हजार दर्शकहरुले महोत्सवको अवलोकन गरेका छन् । महोत्सवमा करिब रु.२५ लाख बराबरको आर्थिक कारोबार भएको महोत्सवका प्रवक्ता ईमकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १६ चैत्र २०७८, बुधबार २१:०४ 106 Viewed